25 zava-misy momba an'i Stephen Hawking izay tsy fantatrao marina
Tsy ela akory izay dia ny fitiavan-tanindrazantsika, lehilahy iray izay naneho ohatra avy aminy no nanaporofo fa tsy maintsy miady ho an'ny aina foana ny olona iray, tsy tokony hiteraka aretina.
Stephen Hawking dia antsoina hoe Albert Einstein amin'izao androntsika izao. Misaotra azy fa izao tontolo izao dia nianatra momba ny tsiambaratelo maro an'izao tontolo izao, ary nampandroso ny fandrosoan'ny sivilizasiona. Ary, na dia teo aza ny aretim-pandrosoana efa miharatsy, dia tena mpanoratra sy mpiteny ary olona mahafinaritra fotsiny i Hawking. Raha vao tapa-kevitra ny hanao ny siansa ho mora azon'ny olon-drehetra izy, dia vitany izany. Nodimandry tamin'ny 14 martsa 2018 izy tamin'izy 76 taona.
Vonona ny hahalala bebe kokoa ve ianao? Indreto misy zava-baovao 25 ​​mahagaga momba an'i Stephen Hawking izay tsy fantatrao taloha.
1. Tao anatin'ny fahatanorany i Hawking dia adala noho ny matematika, saingy nanizingizina ny rainy fa ny zanany lahy dia hiaraka amin'ny fitsaboana amin'ny fiainany.
Farany dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Oxford izy. Nianatra fizik izy. Taty aoriana, tamin'ny taona 1978, lasa profesora momba ny fiheverana ara-tsaina izy, ary tamin'ny 1979 - matematika.
2. Tsy hino ianao, fa hatramin'ny 8 taona ny mpahay siansa amin'ny ho avy dia tsy afaka namaky, ary, araka ny voalazany, tany Oxford dia tsy anisan'ireo mpianatra tsara indrindra izy.
3. Kisendrasendra na tsia, fa ny andro nahaterahan'i Hawking (8 Janoary 1942) dia nifanindry tamin'ny faha-300 taonan'ny fahafatesan'i Galileo. Ankoatra izany, maty ny mpahay siansa tamin'ny andro firavoravoana nataon'i Albert Einstein.
4. Nofinofiny ny nanoratra boky momba ny fizik izay mety ho azon'ny maro an'isa. Soa ihany fa nanao izany izy noho ny fampandrenesana lahateny nataony sy ireo mpianatry ny devoly. Tamin'ny taona 1988, nahita izao tontolo izao ny boky siantifika malaza "Tantara fohy".
5. Tamin'ny 1963 dia nanomboka naneho famantarana momba ny sclérose amyotrophic, izay nitarika ho amin'ny paralysis, i Hawking. Nilaza ireo dokotera fa 2,5 taona monja no niainany.
6. Taorian 'ny tracheotomy iray dia nilaozany i Stefana ary nila fanampiana isan-kerinandro.
Soa ihany, tamin'ny taona 1985, mpamorona programa Kaliforniana no namorona solosaina iray izay napetaka amin'ny tsiranoka matevina eo amin'ny takolaka. Misaotra azy ilay mpitsabo, nitantana ny gadget, izay nahafahany nifandray tamin'ny olona.
7. Nanambady indroa i Hawking. Ny vadin'ny vehivavy voalohany nanome azy zanaka roa, saingy ny sendika niaraka taminy dia naharitra hatramin'ny 1990. Ary tamin'ny taona 1995 dia nanambady ny mpitsabo mpanampy ny mpitaiza azy, izay niara-nipetraka nandritra ny 11 taona (2006 nisara-panambadiana) izy ireo.
8. Ny 29 Jona 2009, amin'ny anaran'i Stephen Hawking, dia nalefa ireo fanasana hanao fety iray izay natao tamin'ny 28 Jona.
Ary tsia, ity dia tsy typo. Izany dia anisan'ireo fotoana niainan'ny fizahan-tany. Mazava fa tsy nisy nanatona ny antoko. Hawking indray dia nanaporofo fa ny fandehanana amin'ny fotoana dia famoronana, ny fototry ny horonantsary, saingy azo antoka fa tsy zava-misy marina izany. Nolazainy fa ny antokony indray dia nanaporofo fa raha misy olona afaka mandeha amin'ny fotoana, dia hanao izany izy mba hitsidika azy.
9. Tamin'ny taona 1966, niaro ny foto-kevitra momba ny "Ny fananana fananganana universe" i Hawking.
Amin'ny ankapobeny, niezaka naneho izy fa ny fiandohan'ny famoronana izao tontolo izao dia mety hamoaka fipoahana lehibe. Raha vao navoaka tao amin'ny Internet, dia nivezivezy avy hatrany ny tranonkala tamin'ny fitsidihana an-tapitrisany avy amin'ny mpampiasa manerana izao tontolo izao.
10. Nieritreritra i Stephen Hawking fa tsy nino an'Andriamanitra izy ary nilaza fa tsy nino an'Andriamanitra izy, na tamin'ny fisian'ny fiainana aorian'ny fahafatesana. Na dia teo aza izany, nanamafy izy fa feno izao tontolo izao sy ny fiainan'ny tsirairay.
11. Ilay mpahay siansa dia niseho im-betsaka tao amin'ny fampisehoana fahitalavitra, anisan'izany ny "Star Trek: The Next Generation", "The Simpsons and The Big Bang Theory."
12. Inona no ho fiafaràn'ny olombelona araka ny fandefasan'i Hawking? Izany dia ny tsindrimpeo kanto, ady nokleary, populations, pandemika ary fiovan'ny toetr'andro. Niriny ny hahita fiainana vaovao amin'ny planeta hafa.
13. Nandeha fiaramanidina manokana i Steven tamin'ny faha-65 taonany mba hahatsapa ny tsy fisian'ny gravité. Ny sidina manontolo dia naharitra efatra minitra.
14. Misy rofia antsoina hoe "Equation Hawking". Izany no fototry ny fahatakarana ny lavaka mainty. Raha vao niteny i Stephen fa tiany ho voasokitra amin'ny tombokaseo izy.
15. Stephen Hawking, niaraka tamin'i Jim Hartle namany, dia nanangana teoria momba ny tsy fahitana an'izao tontolo izao tamin'ny taona 1983. Izany no iray amin'ireo zava-bitany lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'ny mpitsabo iray.
16. Stephen Hawking tamin'ny 1997 dia niasa tamin'i John Presqu'll, Stephen William sy Kip Thorne momba ny fanontana feno ny Rakipahalalana Britanika, momba ny fitehirizana ny vaovao momba ny raharaha efa nalain'ny lavaka mainty ary avy eo navoakany. Vokatr'izany, tamin'ny taona 2004, i John Presquell dia nahazo ny fifanolanana.
17. Tamin'ny taona 1985 dia niaritra pnemonia izy ary tongotra iray manerana izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny dokotera dia nanolotra ny vadiny hanasaraka an'i Hawking amin'ny fitaovana fanohanana ny fiainana, izay novaliany ilay vady: "Tsia". Soa ihany, ny mpahay siansa dia namelona sy nahavita ny fanoratana ny boky "Tantara fohy".
18. Nahazo loka sy lokam-boninahitra maromaro izy, anisan'izany ny loka Albert Einstein, ny medaly hughes avy amin'ny Royal Society of Londres, ary ny medaly filoham-pirenena ho an'ny fahalalahan'ny Barack Obama.
19. Ankoatra izany, i Hawking dia mpanoratra an-tsoratra. Izy sy ny zanany vavy Lucy dia nanoratra bokim-bokatry ny ankizy, izay voalohany nantsoina hoe "George sy ireo tsiambaratelon'izao tontolo izao."
20. Na dia tsy nino an'Andriamanitra aza i Stephen Hawking, dia nino izy fa misy ny sivilizasiona tsy miankina amin'ny fanjakana.
21. Indray mandeha nilaza izy fa raha manakatra ny fomba hampiasana ny angam-baravarankely mainty ny olombelona, ​​dia mety ho mora ny hisolo ny rafitra angovo rehetra eto an-tany.
22. Izy dia manondro ireo mpitsabo ireo, izay, toa an'i Neal Degrass Tyson, dia mino fa misy izao tontolo izao mifanahatahaka amin'ireo sivilizasiona hafa.
23. Nahazo ny mari-pahaizana sinoa lehibe indrindra eran-tany (3 tapitrisa dolara amerikana) i Stephen Hawking noho ny zava-bitany tao amin'ny fotodrafitrasa fototra.
24. Ny vola miditra avy amin'ny bokin'ny mpahay siansa dia eo amin'ny 2 tapitrisa dolara.
25. Tsy isalasalana fa i Stephen Hawking dia matiaty maoderina. Fa ny haavon'ny IQ dia tsy fantatra.
Top 10 horonan-tsary mampihetsi-po amin'ny zava-mitranga tena eran'izao tontolo izao
Teny 11 mampihetsi-po avy amin'i Stephen Hawking
16 tantara ara-tantara, ny halavirany dia miala amin'ny maodeliny na dia amin'izao andro izao aza!
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny The New York Times momba ny sombin-tsainy amin'ny faharanitan-tsainy, dia hoy izy:
"Tsy misy hevitra. Ireo olona manao an'izany sy mirehareha momba ny IQ, raha ny marina, dia very izy ireo. "
12 miasa modely ambony, izay efa mihoatra ny 70
19 olo-malaza izay mandray anjara amin'ny fahafatesan'ny olona
Fanomezana 10 ho an'ny ankizy manan-karena
Indrisy fa ireo olo-malaza 12 eo amin'ny efijery dia tsara kokoa noho ny amin'ny fiainana ara-dalàna!
Amin'izao i Charlize Theron dia vonona ho amin'ny andraikitra: 8 ny fanambadiana tsy hita maso ao amin'ny kintana
Kintana 9, izay nolavina ny zo hanabe ankizy
Zava-dehibe ny fampandrosoana
Fashion Accessories - Spring-Summer 2016
21 dia tsy sakafo misy proteinina
Dots for nails
Vehivavy mitafy kiraro
Sary nalaina avy amin'ny chlamie
Latabatra boribory eo amin'ny lakozia
Potato tao anaty lafaoro
Ny legioma mifangaro amin'ny holatra
Tsy te hianatra ilay zaza
Grass Portulac - fanasitranana
Slim for loss of weight
Jan Thorpe nampiditra ny vahoaka tamin'ny sipany
Ny lokom-behivavy Lakosta